Tim Cook Anopa Al Gore Nyowani Yekushanduka Kwemamiriro ekunze Chinyorwa | IPhone nhau
Al Gore, aimbove mutevedzeri wemutungamiriri weUnited States uye ave kushanda senhengo yebhodhi revatungamiriri veApple, aburitsa firimu rake idzva rakanyorwa pasi pezita "Sequel Isingaenderane: Chokwadi kune Simba" kana "Mhedzisiro isina kugadzikana: chokwadi kune simba", yakapihwa seiyo kutevedzera kune «Chisinganzwisisike Chokwadi«, Iyo yakabudirira zvinyorwa zvakaburitswa anopfuura makore gumi apfuura, muna 2006, uye zvine nharo iyo US" yakaita kunetsekana nezve shanduko yemamiriro ekunze mufashoni ".
Mharidzo yacho yakapindwa, pakati pevamwe, Lisa Jackson, Apple Mutevedzeri Wemutungamiriri weNharaunda, Policy neSocial Initiatives Tim Cook, Iye zvino CEO weApple, uyo anga ari mutariri wekuburitsa nyowani yegore reGore.
1 Al Gore anoomerera ne "mhedzisiro isina kugadzikana"
2 Kubva ku "Chokwadi Chisinganyaradzi" kuenda "Kusagadzikana Mhedzisiro"
Al Gore anoomerera ne "mhedzisiro isina kugadzikana"
Nezve kuratidzwa kwe "An Isingawirirane Sequel: Chokwadi kune Simba", Tim Cook akatanga nekutaura nezvekushanduka kwemamiriro ekunze zvizere uye nezve zvirongwa zvakatoiswa kuti zviitwe nazvo. Nekudaro, maneja wekambani akatsanangura izvo nyika dziri kuuya pamwechete kuti dzigadzire nzvimbo yakachena, uye kuti pane "zvikonzero zvikuru zvekutarisira tariro":
Kune zviratidzo zvakatikomberedza zvematambudziko emamiriro ekunze, asi kune zvekare zvikonzero zvikuru zvekutarisira. Kune masimba anovandudzwa akagadzirwa uye ari kushandiswa zvakanyanya. Inenge nyika dzese pasi pano dzakabvuma kuita zvimwe zvinhu uye misika iri kupa mubayiro simba rinowedzerwazve kwese kwese.
Kune zvikonzero zvakawanda zvekutarisira. Asi zvirokwazvo wachi ichiri kunetseka uye kukurumidza hakuna kumbove kwakakura. Saka ndinofunga hakuna kumbove nenguva iri nani yemufirimu uyu.
Mushure mekutaura kwekutanga kwekutanga, Tim Cook akaunza Al Gore nevamwe vevaya vane chekuita nekugadzirwa kweiyi nyowani zvinyorwa, vasati vaenderera mberi nekuiona.
Uye kana iyo bhaisikopo ichiratidzwa, Lisa Jackson akabatana naAl Gore naJeff Skoll uye vatatu ava vakaita hurukuro pachikuva nezve shanduko yemamiriro ekunze pamwe neiyo nyowani bhaisikopo.
Kubva ku "Chokwadi Chisinganyaradzi" kuenda "Kusagadzikana Mhedzisiro"
Kune avo vasina kumboona kana kunzwa nezvenyaya iyi, "Chinhu chisina kugadzikana mhedzisiro: chokwadi kune simba" inoenderera mberi nekuedza kwaAl Gore kurwisa shanduko yemamiriro ekunze uye kunyanya, inoenderera ichibva uko, muna 2006, iro rakatangira zvinyorwa, "Chokwadi Chisinganakidzi" chakasiiwa. Makambani akaita seSolarCity anoumba mamwe emapoinzi emufirimu.
Kwakatangira "An Isinganzwisisike Chokwadi" yakadzokera kune yekare kupfuura 2004 apo Al Gore akapa hurukuro kuNew York nezve shanduko yemamiriro ekunze. Yakanga isiri nguva yekutanga kuti azviite, anga achizviita kubva kuma90, asi panguva ino akatsigirwa neunganidzwa izere nemasiraidhi ane simba guru rekuona uye meseji yakajeka: kuratidza kuti kudziya kwepasirese kwaive chaiko, kuti kunogona kuve nemhedzisiro ine njodzi uye kuti chikonzero chayo chikuru munhu.
Iyo hurukuro yakapindwa naLaurie David, mugadziri akafadzwa kwazvo naAl Gore neshoko rake zvekuti iye akaronga kuchinjisa mharidzo yake yegirazi hombe. Mushure mekutora pfungwa iyi kune vamwe vake muHollywood, makore maviri gare gare (Chivabvu 24, 2006) "Chokwadi Chisinganakidze" chakaburitswa.
Kunyangwe paine manzwi mazhinji achinongedzera munzira iyo Al Gore nevamwe vake vari kuwedzeredza uye kuti kudziya kwepasirese manyepo, zvinyorwa zvakabudirira zvikuru, kuhwina maOscar maviri uye nehofisi hombe yebhokisi. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti yakabatsira mukusimudzira kuziva nezve kudziya kwepasi.
Makore gumi gare gare, Al Gore anotora kwaakasiya ne "An Uncomfortable Mhedzisiro: Chokwadi kune Simba," gwaro ratiri kutotarisira kuona uye rinotsigirwa naApple, mutsigiri mukuru wesimba rinowedzerwazve. inotanga kuratidzwa muna Chikunguru 28. Ini ndinokusiya uine preview:
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Tim Cook Anopa Al Gore Nyowani Yekushanduka Kwemamiriro ekunze Chinyorwa
Maitiro epaFacebook achasvikawo kuna Messenger